Kodi 18.7 "Leia" inouya ichivandudza zvese zvishoma kuti ive yakavimbika | Linux Vakapindwa muropa
Kodi 18.7 inosvika ichivandudza zvese zvishoma kuti Leia iwedzere kuvimbika
Mukutanga kwaKurume, chirongwa icho chaimbozivikanwa seXBMC chakaburitsa v18.6 yesoftware yayo pane mamwe mapurojekiti akadai LibreELEC 9.2.1. Kwemaawa mashoma isu tine vhezheni nyowani yemultimedia center, a Kodi 18.7 iyo inoenderera pasi pekodhi zita "Leia" uye yakaunza mashoma maficha manyowani. Asi, seyiyi vhezheni vhezheni, mazhinji eaya mitsva maficha kugadziriswa uye shanduko diki kuita kuti zvese zvishande zvirinani.
Sezvatinoverenga mu kuburitsa noti yeiyi vhezheni, vaita kugadzirisa mune zvese zvinhu zvishoma, pakati pazvo patinogadziriswa mune odhiyo uye kugadzirisa mukuberekesa, chimiro, chikamu chemimhanzi, maratidziro uye rutsigiro rwemaAddon rwakavandudzwa. Pazasi iwe une iyo runyorwa ruzere rwemashoko iyo yasvika pamwe chete naKo «Leia» 18.7.
1 Kodi 18.7 Leia inosimbisa
2 Maitiro ekuisa Kodi paLinux
Kodi 18.7 Leia inosimbisa
Mhinduro yekusagadzirisa vhoriyamu yakamisikidzwa nemushandisi (Android).
Multichannel odhiyo track track rutsigiro yakagadziriswa.
Mutambo / Screen:
Kugadziriswa muBluray subtitle mutauro kuzivikanwa.
Inogadzirisa kutamba kwebhasi yakavharidzirwa Bluray discs.
Yakagadziridzwa raibhurari manejimendi emapulagi kana midhiya sosi yabviswa.
Zvino shandisa JNI pachinzvimbo che NDK yeMediaCodec (Android).
Rakawedzerwa basa paupamhi upamhi uye kukwirira / kutwasuka kupeta (Android)
Yechokwadi-nguva manejimendi eTT kufambiswa kwagadziriswa.
Interface / Mufananidzo uye manzwiro:
Fixed wachi icons isiri kuratidza kana zvemukati mhando zvisina kuseta (Estouchy).
Yakagadziriswa kufamba mune skinsettings (Estuary).
Gadzirisa kuparara mune dzekunakidzwa dialog.
Inoshandiswa nzvimbo yakachengeteka inoisa kune Kodi GUI (iOS).
Kugadziriswa kwakatenderedza tarisiro mushure mekubata chiito.
Kugadziridzwa kwakatenderedza dialog / kubata kweiyo tositi.
Hwakagadziriswa hunhu kana uchiwana yakavharwa midhiya sosi.
Kugadziriswa kwakatenderedza kubata kweraibhurari ye "isalbumartist" munda.
Gadzirisa kuwedzera kwemifananidzo .ISO yekudzivirira GUI kuita chando.
Iye zvino inova nechokwadi chekuti muimbi wealbum haana kuvhurika kana uchitsvaga.
Yakagadziriswa kurodha pasi kutsamira kubva kumirazi (Windows).
Zvinyorwa zveRaibhurari: bump gnutls (3.6.11.1) uye nettle (3.5.1).
Yakagadziriswa EPG huori kana ichiwedzera mitsva mitsva pakutanga.
Yakagadziridzwa proxy credential manejimendi.
Gadzirira yeminda isina proxy.
Gadzirisa kuparara kana paine zvisingaenderane VFS plugin.
Yakagadziriswa zita rekuratidzira remakomputa mapakeji madhairekitori.
Inogadzirisa yakatenderedza plugin marongero emafaira mazita.
Kugadzirisa kwakatenderedza kududzira HTML kutiza mavara.
Yakagadziriswa SMI (SAMI) zvinyorwa zvidiki uye zvakadomwa mateki ekutanga.
Mhinduro dzematambudziko ane chekuita nekuchinja kweprofile.
Kugadzirisa kuchengetedza zvido zvekiyi (tenzi kukiya, vhidhiyo hwindo kukiya, nezvimwewo).
Vamwe / General:
Wakawedzera "Swiss German" uye "Portuguese (Brazil)" kumitauro yemitauro.
Gadzirisa kudzivirira chirevo mune tinyxml.
Yakagadziriswa stack yekufashukira kana ichiedza kutsvaga NFO mafaera mune yeRAR dura.
Yakagadziriswa renji yekutarisa mu URIUtils :: resolutionPath.
Tsigiro yemisoro yakawedzeredzwa yemuno inoitwa muZIP mafaera anoshandiswa nevamwe vafundisi.
Maitiro ekuisa Kodi paLinux
Tinogona kuisa Kodi 18.7 uye ese emangwana vhezheni nenzira dzakasiyana. MuLinux, iyo Flatpak vhezheni inomira pachena kuti tinogona kuisa zvakananga nekudzvanya pa Iyi link kana kugovera kwedu kuchisanganisira rutsigiro kana isu takawedzera. Hongu zvirokwazvo, v18.7 ye software haisati yasvika. Kana iyo Snap vhezheni haina kusvika, kunyanya isiri yepamutemo iyo yavanogadzira kubva panzvimbo yeprojekti iyo inogona kuiswa nekuvhura setemu uye kunyora murairo "sudo snap install mir-kiosk-kodi" (pasina makotesheni).
Chinhu chepamutemo kwazvo icho chirongwa chinopa ndeche a repository iyo inogona kushandiswa pakugovera seDebian kana Ubuntu. Kuwedzera nekuisa Kodi isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kufunga izvo Kodi 19 iri pedyo nekonaHatigone kuva nechokwadi kana izvi zvichizoitika, asi vhezheni inotevera inotarisirwa kuve Kodi 18.8, zvakare Leia, iyo inoenderera nekugadzirisa mabugs nekuvandudza mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kodi 18.7 inosvika ichivandudza zvese zvishoma kuti Leia iwedzere kuvimbika
Zvimwe zvinonakidza yakavhurwa sosi AI mapurojekiti
WINE 5.9 inosvika kuunza inopfuura mazana matatu shanduko yekuvandudza iyo "hapana emulator"